घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू स्टीवन गेरार्ड बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल लीजेन्डको पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा प्रसिद्ध हो; 'स्टीभी जी'। हाम्रो स्टीवन जेरार्ड बाल्यकाल कहानी र अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरूले तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण विवरण दिन्छ।
लिभरपूल लीजेन्डको विश्लेषणमा ख्याति, पारिवारिक जीवन र धेरै अफ र अन-पिचको बारेमा थोरै ज्ञात तथ्यहरू भन्दा पहिले उनको जीवनको कहानी समावेश छ।
लुईस वान गल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
हो, सबैलाई स्टीभी जीको बहुमुखी प्रतिभाको बारेमा थाहा छ तर केहीले उनको जीवनलाई पिच बाहिरका लागि विचार गर्दछन् जुन निकै चाखलाग्दो छ। अब थप adieu बिना, हामी सुरु गरौं।
स्टीवन गेरार्ड बाल्यकाल कहानी - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि:
स्टीभन जर्ज जेरार्डको जन्म May० मे, १ 30 .० मा मर्सीसाइड, व्हिसटन, पॉल जेरार्ड (बुबा) र जुली एन गेरार्ड (आमा) द्वारा भएको थियो।
उहाँ एक जन्म दोष भनिन्छ संग जन्म भएको थियो 'क्लबफुट' जसले उसको खुट्टा (उल्टो) मा तल झार्न बनाउँदछ। उनको समयमा उपचार भयो। उनका आमाबुबाले उसको खुट्टा वा पैतालामा हिंडेको चाहनुहुन्न थियो।
रयान गिग्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
बढ्दै गयो, उनले आफ्नो जन्म को क्षति सुधार को माध्यम ले आफ्नो मार्ग मा मजबूर गर्दा धेरै चोटहरु थिए। उहाँले सानो बच्चाको रूपमा समस्याग्रस्त पछाडि समस्याको श्रृंखला पनि पार गर्नुभयो। यी सबैले बरामद गरे।
स्टीभन जेरार्ड सेन्ट माइकलको प्राइमरीमा गए (अब Huyton-with-Roby CE)। उहाँ आफ्ना शिक्षकहरु अनुसार एक लजालु, निजी केटाको रूपमा वर्णन गरिएको थियो।
ऊ जहिले पनि राम्रो, भलो बच्चा थियो, राम्रो संग हुर्केको, " एक शिक्षकले सम्झाउँछ। "तर यो थियो जब उनी6बजे जेनीर गए, र फुटबल खेल्न थाले कि उनको व्यक्तित्व बाहिर आयो.
ऊ विशेष थियो भनेर हेर्न तपाईलाई फुटबलमा विशेषज्ञ हुनु आवश्यक पर्दैन। उहाँ जताततै हुनुहुन्थ्यो। उसले भर्खरै यो माया गर्‍यो। ऊ बस्थ्यो र फुटबल सास। ' गिल मोर्गन भन्छन् कि उनीहरूको विद्यालय टोली शिक्षक थिए।
"त्यस दिन र उनको टोलीसँग धेरै सफलताहरू थिए, प्रायः स्टीभनको कारण।" गिल मोर्गन जारी छ
फुटबल सानो स्टीवन जेरार्डको लागि एक प्राकृतिकको रूपमा आएको थियो। Of बर्षको सानो बच्चाको रूपमा, उसले खेलकुदसँग प्रेम गरे पछि फुटबलमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उत्कृष्ट इच्छा विकास ग .्यो।
उनले घर नजिकै घाँस जड फुटबलमा भाग लिए जुन एभर्टन एफसीको नजिक थियो। निकटतामा आधारित, स्टिभनको एभर्टनको प्रेम बढ्यो। ऊ सँधै यसको जर्सी लगाउँदछ र धेरै अवसरहरूमा ट्राफीको साथ फोटो लिनको लागि गुडिसन पार्क भ्रमण गर्थ्यो।
यद्यपि त्यहाँ अवरोधहरू थिए। युवा स्टीभन जेरार्डले धेरै केटाको लागि स्थानीय केटाहरूको टोली, टोलगेटले अस्वीकार गर्दा आँसु बगाए।
त्यो हप्ता अस्वीकृत भएपछि उनले सेन्ट माइकल्स (उसको घाँट जड क्लब) को साथ भेम्लेको यात्रा पनि हरायो जहाँ स्लाइड ट्याकल गर्ने प्रयास गर्दा कोक क्यानमा उसको खुट्टा काट्यो।
स्टीवन गेरार्ड बाल्यकाल जीवनी - अधिक बचपन दुर्घटना:
अर्को गम्भीर चोट लाग्दा आफ्ना साथीहरूसँग फुटबल खेल्दा अन्ततः युवा स्टीभनको क्यारियर सुरु हुनु अघि नै अन्त्य हुन सक्थ्यो।
एक युवा को रूप मा साथीहरु संग एक किक- बारे मा, जवान Gerrard एक freak दुर्घटना सहनु पर्छ कि लगभग उनको आफ्नो क्यारियर खर्च। बल हेजमा अड्किए पछि, उनले बललाई लात बाहिर खेल्न गए तर यसको सट्टा एक बगैचा काँटा लगाइयो.
यो आफ्नो जूता र उनको ठूलो पैरमा गए। एक जना चिकित्सकले भने कि उसको खुट्टाको औंला काट्नु आवश्यक पर्दछ। यसले उसका बाबुआमाले अन्य स्टिभ विकल्पहरू खोज्न बाध्य पार्‍यो गरीब स्टिभलाई ट्र्याकमा फर्काउन।
थप मेडिकल विकल्पहरूमा, तिनका आमाबुबाको लागि आशा व्यक्त गरिएको थियो जब पूर्ण स्वाभको लागि जवान स्टीभको रोड सुरु भयो र राम्रोसँग अन्त्य भयो।
ऊ स्वस्थ भए पछि गेरार्डले मूल रूपमा आफ्नो गृहनगर टिम, ह्वास्टन जुनियर्सको लागि खेल्न शुरू गर्यो। यहाँ उनी लिभरपूल स्काउट्स द्वारा देखा परेको थियो, र उनी age वर्षको उमेरमा उनीहरुको एकेडेमीमा सम्मिलित हुने थिए।
उनले केहि भिन्न टोलीहरुमा प्रयास गरे, जसमा मैनचेस्टर युनाइटेड, जो उनले असफल भए। (हो तपाईले त्यो दाँया पढ्नुहुन्छ)।
स्टीवन जेरार्ड सम्बन्ध जीवन:
Fashion बर्षे फेशन पत्रकार / मोडेल एलेक्स कुरान डेटि After गरेपछि, उनीहरूले २००5मा क्याथोलिक विवाह गरे।
करानले आफ्नो फेसन लाइनको शुभारंभ गरेको छ, डेली मेलको लागि एक फैशन स्तम्भ लेखेको छ र मोडेललिंगमा अनुभव छ। यस जोडीले3छोरीहरू, लिली-एला (2003), लेक्सी (2006) र Lourdes (2011) छ।
स्टीवन जेरार्ड जीवनी - पुस्तक:
सेप्टेम्बर 2006 मा, गेरार्डले आफ्नो ओटोबियो भनिन् 'Gerrard: मेरो आत्मकथा'।
यस पुस्तकले ब्रिटिश पुस्तक पुरस्कारमा स्पोर्ट्स बुक अफ द इयर सम्मान जित्यो।
जेरार्डको उनकी आत्मकथाको दोस्रो खण्ड, मेरो लिभरपूल स्टोरी ' लेखिएको छ डोनाल्ड मैकरा, सेप्टेम्बर २०१ 2015 मा प्रकाशित भएको थियो। टीऊ आत्मकथा अन्त हुन्छ "म जोन-पावलको लागि खेल्छु।"
जेरार्डका काका, जोन-पॉल गिलहुले १ 1989 XNUMX। को हिल्सबरो दुर्घटनामा मारिए जब जेरार्ड आठ वर्षको थिए।
जोन-पॉल, जो १० वर्षको उमेरमा मरे, दुर्घटनाको शिकार भएकाहरू मध्ये सबैभन्दा कान्छी थिए। ऊ सबैभन्दा कान्छो लिभरपूल फ्यान पनि थियो।
उनका काका पउला कादीरी र डोना रिडल्याण्ड जसले उनलाई नानी बनाउँथे, उनको वर्णन गरे "राम्रो बच्चा"।
यो नोट गर्न उचित छ कित्यो सेन्ट कोलंबस प्राथमिक स्कूल विद्यार्थी एक वेदीका केटा थिए र पोप पछि नाम थियो।
उहाँ लिभरपुलका कप्तान स्टीभन गेरार्डको काकाको भाई हुनुहुन्थ्यो र जोडी उनीहरू बच्चाहरू हुँदा सँगै खेल्ने थियो। स्टीवन एक वर्ष कान्छो थिए।
"मेरो एक चचेरो भाईले आफ्नो ज्यान गुमायो भनेर जान्न गाह्रो भयो", गेरर्डले भन्यो। "उनको परिवारको प्रतिक्रिया देखेर म आज खेलाडी बन्न बाध्य भएँ।"
उनको 2015 आत्मकथामा, गेरार्डले भनेका छन् कि उनको साथमा खेल्ने चार उत्कृष्ट खेलाडीहरू पूर्व लिभरपूल समूहहरू हुन्। Xabi Alonso, फर्नोडो टोरास र लुइस सुरेज र इङ्गल्याण्ड समूह वेन रोनी.
स्टीवन जेरार्ड जीवनी तथ्य - मानद पुरस्कार:
तिनले एक औपचारिक संगोष्ठी पाए लिभरपूल जॉन मोर्स विश्वविद्यालय २ July जुलाई २०० on लाई खेलमा उनको योगदानको लागि मान्यताको रूपमा।
स्टीभन जेरार्ड अनटोल्ड बायो - उनले २०० B मा आफ्नो बेंटलीसँगै १० बर्षको उमेर ढकढक्याएः
1 अक्टोबर 2007 मा, गेरार्ड मा कम गति टक्करमा संलग्न थियो Southport जब उनले सवारी चालक कारको एक दश वर्ष पुरानो साइकल चालकलाई ठक्कर दियो, जसले सडकमा गोली हान्यो र अन्जानमै जेरार्डको बाटो पार गर्यो।
पछि उनी अस्पतालमा केटालाई भेट्न आए र उनलाई हस्ताक्षर गरेको जुत्ताको साथ प्रस्तुत गरे वेन रोनी, केटाको मनपर्ने खेलाडी, जुन पछि उनी अरू युवा बिरामीहरूको लागि अटोग्राफमा हस्ताक्षर गर्न बसे
29 डिसेम्बर 2008 मा, गेरर्ड को लाउन्ज इन मा Southport को बाहिर को संदेह मा हिरासत मा लिया गएको थियो खण्ड 20 आक्रमण. उहाँ र दुई अन्यलाई पछि वास्तविक शारीरिक क्षति र एरेयरमा आक्रमणको आरोप लगाइएको थियो।
यो एक घटनासँग सम्बन्धित छ जुन एक बारको डीजे भाँचेको दाँत र उसको निधारमा काट्यो। जेरार्डलाई लिभरपूल क्राउन अदालतमा उपस्थित हुनु आवश्यक थियो र उनले आफ्नो मुद्दाको सामना गर्नुपर्यो जसको लागि उनले आफूलाई दोषी ठहराएनन्।
उनका सह-प्रतिवादीहरूले मुद्दाको अघि मुद्दा हालेका थिए तर जेरार्डले आफ्नो निर्दोषतालाई कायम राखे। जेरार्डले मार्कस म्याकजीलाई कुट्ने स्वीकार गरे तर यो आत्मसुरक्षामा रहेको दाबी गर्‍यो।
२ July जुलाई, जेरार्ड निर्णायकले दोषी पाएनन्। फैसलापछि, जेरार्डले भने कि ऊ फिटबल खेल्न र अनुभव पछाडि राख्ने आशा गर्दैछ। त्यसपछि उसलाई स्वतन्त्र जान दिइयो।
स्टीभन जेरार्ड जीवनी - १ क्लबका लागि 3०० वा बढी प्रीमियर लिग प्रदर्शन गर्ने तेस्रो खेलाडी:
आधुनिक खेलमा वफादारता धेरै साधारण छैन, तर स्टीवन गेरर्डले आफ्नो सम्पूर्ण क्यारियर लिभपूलमा रहेको र त्यहाँ एक लामो र सफल क्यारियरको आनन्द उठाइरहेको छ।
२ April अप्रिलमा, जेरार्ड १ क्लबका लागि 25०० बढी प्रिमियर लिगमा प्रदर्शन गर्ने तेस्रो खेलाडी भए।
एकल प्रीमियर लिग क्लबको लागि अधिक खेल खेलेका खेलाडीहरूको संख्या: जेमी काररागर (लिभरपूलका लागि for०508) र रयान गिग्स (म्यान युनाइटेडका लागि 632 XNUMX२)
२०११ मा जेरार्ड फिल्ममा देखा पर्‍यो।हुनेछ '।
यो चलचित्र एक अनाथन युवा लिभरपूल फ्यानको बारेमा थियो जसले चिच्याउने कुरो 2005 UEFA चैंपियंस लीग फाइनल.
गोल स्कोरिंग तथ्य:
उनी एक मात्र फुटबलर हुन् जसले एक एफए कप फाइनल, एक लिग कप फाइनल, एक यूईएफए कप फाइनल र एक च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा गोल गरेका छन्। (ठिक छ किन कि उनी कप्तान फन्ट्यास्टिक हुन् तपाईंलाई थाहा छ)।
यो बायो लेख्दा, केवल १ number जना खेलाडीहरूले गेराार्ड (१२०) भन्दा बढि प्रिमियर लिग गोल गरेका छन्। भूतपूर्व मिडफिल्डरका लागि खराब छैन।
२००3च्याम्पियन्स लिग खेलको पहिलो लिगपुल पहिलो हाफ पछि was-० ले कम हुँदा स्टिभि जीले लिभरपूललाई ​​खेलमा तान्नको जिम्मेवारी लिनुभयो।
उनले पहिलो हेडर स्कोर गरे जुन उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न र अन्ततः उनीहरूलाई चैम्पियन्स लिगको ट्रफी दिए।
उनले जानाजानी २०० penalty सीएल फाइनलमा शुट हुँदा अन्तिम पेनल्टी लिने निर्णय गरे।
यद्यपि उनले यो लिनु पर्दैन किनभने शेभचेन्को हरायो, उनी अन्तिम पेनाल्टी लिने व्यक्ति बन्न चाहन्थे किनकि उनी विश्वास गर्छन् कि उनी क्लबका कप्तान थिए र त्यसैले यो पेनाल्टी लिनु उनको जिम्मेवारी हो।
रायन मेसन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू